Aung Win Hein (Noble): 11/28/12
“မေတ္တာကို ပေးရတာ ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး…”
Happy people know how being altruistic helps you see outside yourself.
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ လူမှုရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
အများအကျိုးကို လုပ်တာဟာ ကိုယ့်အတ္တကို ကျော်လွှားတာပါပဲ။
ကိုယ့်အတ္တကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူဟာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
အတ္တထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူဟာ စိတ်ချမ်းသာမှု မရနိုင်ဘူး။
Happy people see shades of gray instead of just black and white.
အကောင်း အဆိုး ရောနေတယ် လို့မြင်တယ်။
အဖြူသက်သက် အမဲသက်သက် မမြင်ဘူး။
မီးခိုးရောင် အမျိုးမျိုးကိုပဲ မြင်တယ်။
This “shift of perception” gives people the wherewithal to go on, even when life looks its worst.
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ ဒုက္ခနဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ ရယ်စရာဖြစ်အောင်
ဒါကြောင့် ရှေ့ကို ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။
အခြေအနေအဆိုးဆုံးမှာတောင် လုပ်သင့်တာကို ဆက်လုပ်နိုင်တယ်။
If happy people were to die today, “they would be satisfied with their lives.”
ဒီနေ့သေရမယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ဘဝကို သူတို့ ကျေနပ်နိုင်တယ်။
တတ်နိုင်သလောက် ကောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။
လူတွေကို သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
လူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှု လေးစားမှုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရခဲ့တယ်။
Even better than being loved is loving somebody.
ကိုယ်က ချစ်တာဟာ အချစ်ခံရတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်က မေတ္တာကို ပေးရတာ ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး။
စိတ်ချမ်းသာမှုကို ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတာ ဘာကြောင့်လဲ။
စိတ်ချမ်းသာမှုကို စိတ်ကပဲ ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်က စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖန်တီးမပေးရင်
တခြား ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မရနိုင်ဘူး။
ကိုယ့်ဘဝကို လွှမ်းမိုးတာ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ယုံကြည်မှုတွေပဲ။
ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာ ဖြစ်တာတွေ တော်တော်များများဟာ ယုံကြည်မှုနဲ့
စိတ်ချမ်းသာချင်ရင် မဖြစ်သင့်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို ပြင်ရမယ်။
ဘယ်လိုအမြင် ဘယ်လိုယုံကြည်မှုတွေကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာ
လေ့လာသင့်တယ်။ သုတေသန လုပ်သင့်တယ်။
အတွေးမှန်ရင် အပြောမှန်မယ်။ အလုပ်မှန်မယ်။
သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ရင် သမ္မာ သင်္ကပ္ပ ဖြစ်မယ်။
သမ္မာသင်္ကပ္ပ ဖြစ်ရင် သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မ န္တ ဖြစ်မယ်။